Millionaire Son in Law Novel Isahluko 2197 - 2198 | XperimentalHamid
Millionaire Son in Law Novel Isahluko 2197 - 2198
April 10, 2021 by I-Hisam Ullah
Funda Isahluko 2197 - 2198 yenoveli Indodana kaMillionaire eMthethweni by INkosi Leaf mahhala online.
UCynthia wayengasafuni ukuqhubeka nalolu hlobo losuku olunzima.
Uma kufanele ulinde impela kuze kubuye uMkhosi ka-Ephreli, akufani nokumbulala.
UZhongquan wehlulekile ukuzibamba waduduza: “UCynthia, vele ukwamukele bese uyathukuthela bese ulinda ezinye izinsuku ezimbalwa. Uma uCharlie engazimisele ukukudedela, ngizomshayela ucingo. ”
UCynthia ngokwemvelo wayenezinkulungwane zezikhalazo enhliziyweni yakhe, ngakho-ke akazange alinge ukusho okuningi.
Wacabanga ngasese enhliziyweni yakhe: “Sengiyabona manje. Emehlweni kababa, uCharlie ungumuntu obaluleke kakhulu emndenini wakwaWade. ”
"Angithi uma engashada nendodakazi kaPhilip ngempela, uzobe engomunye wezindlalifa zomndeni wakwaGu ongama-trillion, okuzosiza kakhulu umndeni wakwaWade."
"Ngaphansi kwalesi simo, ngingaqhathanisa kanjani nokubaluleka kukaCharlie nendodakazi eshadile emehlweni kababa?"
"Hheyi, kubonakala sengathi ngingaphuka amazinyo ami kuphela bese ngigwinya."
Ngakho-ke ubengasho ngokuthukuthela kuphela: “Kulungile Baba, ngiyazi… Bese ngizolinda ngesineke ezinye izinsuku ezimbalwa. Uma uCharlie engangidedeli ngihambe ezinsukwini ezintathu noma ezinhlanu, kuzofanele umbize futhi sikhulume… ”
Njengoba esho, ikhala lakhe libuhlungu, wakhala.
UZhongquan ududuzekile: “Kulungile, ungakhathazeki, izinsuku ezintathu, uma uCharlie engakuvumeli uhambe ngemuva kwezinsuku ezintathu, ubaba uzombiza uqobo!”
UCynthia wanqekuzisa ikhanda, waklinya wathi, “Baba, kulungile-ke, ngizobe ngilindile…”
"Kulungile, usale kahle."
Ngokuqedwa kwekholi yevidiyo, izinyembezi emehlweni kaCynthia azibange zisakwazi ukuma, zihamba kancane.
Ngalesi sikhathi, ngokungazelelwe wezwa kungqongqoza umuntu emnyango.
UCynthia weqa embhedeni, wagijimela emnyango ngezinyathelo ezimbalwa, wavula umnyango.
Ngaphambi kokuba abone lo muntu ngaphandle, athuke ngokungabekezeleleki: “Wena [i-imeyili ivikelwe], uzongidedela nini? ”
UCharlie ubheke uCynthia ngesikhumba esibuthuntu nezikhwama zamehlo ezivuvukile, wahwaqabala, wathi, “Anti, isimo sezulu e-Aurous Hill sinomswakama futhi siyabanda. Ube lapha izinsuku eziyisishiyagalolunye. Intukuthelo ayikacindezelwa okwamanje? ”
Lapho uCynthia ebona ukuthi kwakunguCharlie, wabuza ngokushesha ecasukile: “Charlie! Ubungasho ukuthi uzongidedela ngemuva kwezinsuku eziyisikhombisa, kepha amehlo ami avaleke lapha izinsuku eziyisishiyagalolunye ngabantu bakho, kungani ungangidedelanga? ! ”
Phela wabona u-Orvel emi eduze kukaCharlie wakhuza ngolaka wathi: “Yilento [i-imeyili ivikelwe], ongivalele izinsuku ezimbili ngasese, ulahliwe! ”
UCharlie uthe ngokungakhathali: "Bengiqonde ukukugcina ezinye izinsuku ezimbili."
UCynthia ubuze ngokucasuka: “Kusobala ukuthi usho izinsuku eziyi-7, kungani uziphendule zaba yizinsuku eziyi-9? Kungani? ”
UCharlie wafutheka futhi wathi ukuquleka: “Ungu-anti wami? Kunzima ukuza lapha, ungahamba kanjani ngezinsuku eziyi-7 kuphela? Noma yini oyishoyo, ungahlala izinsuku ezimbili ngaphezulu. Ngabe kunjalo? ”
UCynthia wayesezoqhuma ngesimo sikaCharlie sokudelela, futhi wakhuza ngolaka: “Charlie! Awufuni ukuba mbumbulu nami! Angikazi namanje? Ake ngikutshele, kungcono ungenzi lutho nami, ake ngibuyele emuva ngokushesha! ”
UCharlie wanikina ikhanda kancane, wabubula wathi: “Kubukeka sengathi ezinsukwini eziyisishiyagalolunye, awukwazi ukunqanda intukuthelo yakho. Isibhakabhaka sase-Eastcliff somile, futhi intukuthelo yakho inkulu kakhulu, nakanjani iyoba nzima kakhulu lapho ubuyela emuva. Ngokubona kwami, Kufanele uqhubeke nokuhlala e-Aurous Hill izinsuku ezimbalwa bese uvumela intukuthelo yakho icime ngokuphelele ngaphambi kokuhamba! ”
Ngemuva kwalokho, wavele wathi ku-Orvel eceleni kwakhe: “Orvel!”
U-Orvel uphuthume wagebisa izandla zakhe: “Mnu. Wade, iziphi iziyalezo zakho? ”
UCharlie wamomotheka wathi: “U-anti wami usadinga ukuhlala e-Aurous Hill izinsuku ezimbalwa. Ngalesi sikhathi, ngizokuhlupha ukuthi uqhubeke nokumbuka ngokuqinile. Konke sekufana nasekuqaleni. ”
U-Orvel washesha wabuza, “Mnu. Wade, usho ukuthi zingaki izinsuku… zingaki izinsuku? ”
UCharlie wacabanga isikhashana wahleka: “Ngakho-ke, asihambe izinsuku eziyi-7. Kuzoba yisonto lonke ukuthola ibhalansi. Uma lezi zinsuku eziyi-7 zingasebenzi, kufakazela ukuthi ubabekazi uthukuthele kakhulu, kuzofanela simnikeze, ezinye izinsuku. Kuyinto enhle kakhulu. ”
U-Orvel wamomotheka wathi, “Kulungile nkosi Wade, ngiyazi!”
Lokho uCharlie ayekucabanga ngalesi sikhathi kwakuwukuthi: “UCynthia, awusiyo indodakazi yomzali wami, ungaziphathi njengendlovukazi lapha. Awukaphenduki namanje. Uma unenkani, ungasoli abangaphansi kwami. Unonya, lokhu kungalapha isimo sakho sengqondo, yilokho engithemba ukuthi! ”
Lapho ezwa amazwi kaCharlie, ubuso bukaCynthia baphenduka ngokuphazima kweso!
Ithoni yakhe yathamba ngokushesha, futhi wancenga ekhala: “Charlie! Awukwazi ukuba kanjena! Ngihlukumezekile ezinsukwini eziyisishiyagalolunye ezedlule kangangoba angisabonakali njengomuntu. Uyazi ukuthi ngiphile kanjani kulezi zinsuku eziyisishiyagalolunye? Ukudlile ukudla abanginika khona? Amanzi anamafutha alungile, akukho ndawo yokuhlanza ubuso, akukho buso ebusweni, ngisho ne-eyeliner… ”
“Isimo sesikhumba sami sibi kangangoba ngiyafa. Kuzothatha okungenani inyanga ukuyibuyisa. Uma ungivalela ezinye izinsuku eziyisikhombisa, isikhumba sami sizobe sesiqedile ngempela… ”
UCharlie wabeka ukumamatheka ebusweni bakhe futhi wathi ngokuzithoba: “Malumekazi wami omuhle, awukaqondi ukuthi kungani ngifuna uhlale e-Aurous Hill, hlala lapha!”
“Ngikuvumele ukuthi uhlale lapha, ukuze ukwazi ukususa ulaka lwakho ufunde nokuba ngowesifazane olungile. Uma ungakwenza, ngizokudedela uhambe; uma ungeke ukwazi ukukwenza, ngizokuvumela ukuthi uhlale uze ukwazi ukukwenza. Lokho
s it! ”
"Ukuthi isikhumba sakho sihle noma sibi, sihlobene kanjani nami?"
UCynthia wayethukuthele kakhulu, kodwa ebusweni, wayesancenga ngezinhliziyo ezibuhlungu: “Charlie, ngingubabekazi wakho, siwumndeni, ungangiphatha kanjani kanje…”
UCharlie wamomotheka wathi: “Hawu, usuqala ukungiphatha njengomndeni manje? Kungani ungangiphathanga njengomndeni ngesikhathi uvela e-Eastcliff uzongitshela? Umndeni? ”
UCynthia waba namahloni kakhulu futhi wahlazeka: “Ngi… ngikwenzele wena…”
UCharlie wamomotheka wathi, “Ngakho-ke ungenzele konke okuhle!”
UCynthia washo obala wathi: “Hhayi bo! Ngingubabekazi wakho, uma ngingakulungele, kufanele ngenzele bani? ”
UCharlie washaya izandla washo ngokumamatheka: “Lokho kuqondane nje, anti, ngikwenzela lokhu manje ukuze kuzuze wena! Akufanele wehlise izinhloso zami ezinhle! ”
Ngemuva kwalokho, wabheka uCynthia ngenhliziyo.
Qhubeka uthi: "Manje ngikunikeza izinketho ezimbili!"
"Owokuqala, ngobuqotho uhlale lapha ezinye izinsuku eziyisikhombisa!"
"Kulezi zinsuku eziyisikhombisa, awuvunyelwe ukufunga, ngeke uhlanye, awuvunyelwe ukuklabalasa umemeze lapha!"
“Uma uziphatha kahle, ezinsukwini eziyisikhombisa ngizotshela abantu bakithi ukuba bakuyeke uhambe!”
Ngemuva kokulalela uCynthia wabuza, “Kuthiwani ngesinqumo sesibili?”
UCharlie wathi ngokungakhathali: “Indlela yesibili ukuhlala lapha enye inyanga! Kule nyanga, uma ufuna ukuthuka ungafunga, uma ufuna ukusangana, ungasangana, uma ufuna ukumemeza, vele ukhale ngendlela othanda ngayo. Memeza, ngizobe ngijabule ngemuva kwenyanga! ”
"Uma ngijabule, ungabuyela emuva ngqo."
“Kodwa uma ngiphatheke kabi, ngiyaxolisa, kungadingeka ngihlale nawe isikhashana futhi ngenze konke okusemandleni ami njengomninindlu!”
Millionaire Son in Law Novel Isahluko 2195 - 2196
Millionaire Son in Law Novel Isahluko 2199 - 2200